Isdhexgalka Barnaamijka Maareynta Kireynta Fasax | Isdhexgalka Zeevou
Zeevou waxay la midowday lamaanayaal badan oo kala duwan si ay awood kuugu siiso inaad si otomaatig ah uga shaqeysato dhinac kasta oo ka mid ah meheradaada martigelinta min qiimaha, qiimeynta martida, isgaarsiinta iyo xisaabinta.
Weligaa ha seegin mid kale oo nadiif ah, kormeeridda hawl kasta oo kale, la soco dhammaan arrimaha dayactirkaaga, oo waqti iyo lacag badbaadi.
Isku-darka websaydhkaaga Wix iyo mashiinka ballansashada ee Zeevou oo leh qasabno yar, oo hel duubitaanno toos ah oo dheeri ah.
U fur albaab cusub xiriiro aan xad lahayn oo la xiriira barnaamijyada dhinac saddexaad xitaa haddii Zeevou aysan ku milmin barnaamij gaar ah laakiin Zapier uu ku biiro.
Aalado xitaa waxyaabo badan oo ka mid ah meheraddaada martigelinta oo la wadaag xogta ka socota gudaha Zeevou annaga OpenAPI.
Ku qor kiradaada Xayeysiiska Huteelka Google iyada oo loo marayo Zeevou, riix qiimahaaga iyo helitaankaaga, oo hel duubitaan toos ah oo toos ah oo ku qulqulaya mashiinkaaga ballansashada.
U soo gudbi khariidada bogga ee ay soo saartay Zeevou Google Search Console si loo cabbiro taraafikada tooska ah ee taraafikada iyo waxqabadka iyo hagaajinta arrimaha Zeevou.
U adeegso Zeevou's iFrame oo ku dheji wijidka raadintaada boggaaga Wix ama degel kasta oo websaydh ah oo aad horeba u samaysatay.
Ku xidho websaydhkaaga jira WordPress-ka Zeevou's Engineing Booking oo si habsami leh ugu wareeji martidaada bogga natiijooyinka raadinta Zeevou xitaa iyaga oo aan dareemin.
Nuqul ka samee oo ku dheji lambarka raadraaca GTM-ga Zeevou, raac raadinta tooska ah ee ballansashada boggaaga Zeevou, oo fiiri haddii bogagga iyo ficiladu beddelayaan iyo in kale.
Si fudud u dhexgal websaydhkaaga ballansashada tooska ah ee 'Zeevou Google Analytics', oo ka hel fikrado gorfayn ku saabsan waxqabadka boggaaga oo arag waxa u baahan hagaajinta.
Isku-darka Zeevou iyo Elavon waxay gacan ka geysaneysaa habka lacag-bixinta iyada oo loo marayo isku-xiraha 3-D ee aaminka ah, deebaajiga hore ee oggolaanshaha iyo sii-deynta saxda ah ee Zeevou.
Ka faa'iideyso bixiye hormuud u ah howlaha ka shaqeynta lacag bixinta si loo socodsiiyo lacagaha, soo celinta, iyo deebaajiga hore ee oggolaanshaha iyo sii deynta.
Qaado oo ka shaqee lacag-bixinta khadka tooska ah. Isdhexgalka Zeevou ee PayPal wuxuu ka caawiyaa aruurinta lacagaha iyo soo celinta lacagaha saxda ah ee Zeevou.
U adeegso isdhexgalka Zeevou iyo ClickSend si aad otomaatig ugu noqoto isgaarsiinta martidaada, u dirista SMS-yada suuq geynta iyo inbadan oo ka mid ah taleefankooda.
U dir si sharci ah oo xaddidan Shuruudaha & Shuruudaha tooska ah sanduuqa martida oo u hel saxiixa elektaroonig ah jawaabta.
Isku-darka Zeevou iyo Opayo ee Elavon wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ka shaqeyso lacag-bixinta iyo soo-celinta, iyo sidoo kale deebaajiga amniga ee loo maro xiriiriyeyaasha 3-D.
Si fudud u dhexgal Worldpay iyo Zeevou, oo qaado oo ka shaqayso lacag bixinta iyada oo loo marayo isku xirka 3-D, otomaatiga deebaajiga horay u sii deynta iyo sii deynta.
Isticmaal talooyinka qiimeynta ee ku saleysan xogta ee ku saleysan xilliyeedka, maalinta usbuuca, waqtiga hogaaminta, iyo dalabaadka maxalliga ah si aad u hagaajiso sicirkaaga iyo sidaas dakhligaaga.
Ka faa'iideyso xogta suuqa ee waqtiga-dhabta ah si aad ugu fiicnaato sicirkaaga oo ku saleysan talooyinka qiimaha isla markaana aad u kordhiso dakhliga iyo degganaanshaha liiskaaga.
Isku-darka Zeevou ee Stripe wuxuu bixiyaa 3-D xiriiriyeyaal lacag bixin si looga hortago khayaanada, otomaatigga deebaajiga hore ee oggolaanshaha, iyo soo celinta nidaamka.
Automate xisaabintaada si aad uhesho waqtigaaga iyo kharashaadkaaga. Zeevou waxay soo dejin kartaa shaxdaada xisaabaadka jira, qorshaha canshuurta iyo qaybaha raadraaca.
Otomatiya jiilka ururinta iyo koodhadhka hoos u dhaca. U isticmaal tan furayaasha martida ee ku xiran boos celinta, iyo furayaasha ay isticmaalaan shaqaalaha ama nadiifiyayaashu.
Isdhexgalka barnaamijyada kala duwan waa mid ka mid ah dhinacyada ugu muhiimsan ee barnaamij kasta. Intee in le'eg ayey ka badan tahay midka isku dayaya inuu noqdo xarunta dhexe ee dhammaan howlahaaga sida milkiilaha meheradda martigelinta! Taasi waa sababta annaga ahaan, isku-dhafiddu ay yihiin kuwa mudnaanta ugu sarreeya leh. Waxaan si joogto ah uga shaqeyneynaa is dhexgalka la-hawlgalayaal badan.
Marabtaa inaad la midowdo Zeevou?
Isdhexgalkeena jira ayaa daboolaya adeeg bixiyeyaal ballaaran. Kuwaas waxaa ka mid ah:
Qalabka qiimeynta firfircoon sida Qiimaha Beyond iyo Qiimaha Lacagta. Kuwani waxay u shaqeeyaan si la mid ah Qiimaha Smartb ee Airbnb ama HomeAway's MarketMaker.
Albaabada lagu shaqeeyo ee lacag bixinta iyo adeeg bixiyeyaasha ganacsiga sida PayPal, karbaash, SagePay, ama Worldpay.
Saxeexan - softiweer saxeex dijitaal ah oo loogu talagalay helitaanka saxeexyada elektaroonigga ah ee sharci ahaanta ah ee martida, iyo waliba ururinta Aqoonsiga qaab waafaqsan GDPR.
KeyNest - adeeg isweydaarsiga furaha otomaatiga ah ee shaqaalaha iyo martida labadaba.
Xero - xirmo xisaabeed iyo xisaabinta adduunka hormuud ka ah.